Sezvinoonekwa PaTV Media, Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau
Posted on Dai 9, 2017 November 20, 2020 by csr 1687
Pfungwa uye vatambi zvakatanga kuunzwa muzvikamu zviviri zveiyo CBS akateedzana JAG (mwaka misere zvikamu 20 ne21: "Ice Queen" uye "Meltdown"). Iyo showa, yakasununguka kubva kuJAG, yakatanga musi waGunyana 23, 2003, paCBS. Kusvika pari zvino, yakaratidza mwaka gumi nematatu izere uye yapinda mukushambadzira syndication kuUSA Network neCloo.
Donald P. Bellisario naDon McGill ndivo vanogadzira pamwe uye vagadziri vevatungamiriri vemutungamiri wekutanga weNCIS franchise. Ndiyo yechipiri yakareba-yakamhanyisa yakanyorwa, isina-hupenyu US yekutanga nguva yeTV irikuridza, ichipfuura chete neMutemo & Order: Yakakosha Yevanokuvadza Unit (1999-iripo), uye ndiyo yegumi neshanu-refu-inomhanyisa yakanyorwa US yekutanga nguva TV akateedzana.
kupinda Izvi re muna Sezvinoonekwa PaTV Media, Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, famba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.
4 Zvinhu zvekuwedzera Wiricheya Mushandisi Rusununguko